Maxaad dooneysaa in aad ka oggaato kulankii xildhibaannada ee u baaqday kooram la’aanta? – Kalfadhi
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo shalay yeelan lahaa kulan looga hadlaayo xisaab xirka Miisaaniyadda sanadkii tegey ee 2018-kii, ayaa waxaa uu kulankooda u baaqday kooram la’aan.
Mas’uuliyiinta Wasaaradaha Maaliyadda iyo Caafimaadka ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu waday inay ka qeyb galaan kulanka, si ay mudanayaasha warbixino uga siiyaan xisaab xirka miisanad sanadeedka 2018-ka iyo Hindise sharciyeedka Daawada.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa sheegay in kulankii shalay ay golaha yeelan lahaayeen uu u baaqday kooram la’aan, taasina ay dhibaato ku tahay golaha sharci dejinta dalka Soomaaliya.
Wakhtigii caadiga ahaa ee kulanka ayaa waxaa lagu daray 30 daqiiqo, markii la waayay in kooramka uu buuxsamo, ayaa xildhibaanno fadhiyay kulanka waxaa ay codsadeen in fadhiga aan la xirin ilaa laga gaaro 12-ka duhurnimo, waxaana markii la waayay xidlhibaannadii kooramka buuxin lahaa la xiray kulankii shalay 1-da duhurnimo oo dhiman rubac.
Golaha Shacabka ayaa waxaa horyaalla Ajandayaal dhowr ah kuwaasi oo kala ah inay akhrinta koowaad marsiiyaan Xisaab xirka Miisaniyadda sanadkii tegay iyo akhrinta koowaad ee Hindise sharciyeedka Daawada, waxaana shalay la doonayay in xildhibaannada ay ka doodaan.
Xildhibaannada ayaa dhaliil u jeediyay guddoonka Baarlamaanka-